Hawaii - Fitantanana ny jono | Fiaretana haran-dranomasina
Hawaii - Fitantanana ny jono
Fitantanana ny fandrosoana amin'ny fisakanana haran-dranomasina: Kahekili Herbivore Maneran-tany
Ny fanaraha-maso maharitra ny haran-dranomasina eny amoron-dranomasina any amin'ny nosy Maui dia nanomboka tao amin'ny 1999 avy amin'ny State of Hawai'i's Resources of Water Resources (DAR) sy ny Oniversite ny Hawai'i's Institute of Marine Biology's Coral Reef Monitoring Assessment Program. Betsaka amin'ireo toerana fanadihadiana momba ny haran-dranomasina no napetraka tao amin'ny tranokalam-pianarana teo aloha, izay manome ny mpitantana ny sarin'ny fiovana eo amin'ny rafi-dalamby. Ny fanamarinana dia nampiseho fa ny vatohara sivy no nanara-maso, maro ireo tranonkala no nihena ny fihenan'ny vatohara velona rehefa nanjary nihoaran'ny ala mitentina ny vatohara. Tany Kahekili any avaratr'i Kā'anapali, ireo tranonkala fitsangatsanganana amin'ny vatohara dia nanondro ny fihenam-bidy amin'ny vatam-paty tamin'ny 55% ka hatramin'ny 33% eo anelanelan'ny 1994 sy 2006.
Ny fitomboan'ny algan'ny invasion dia hita fa loza mitatao ho an'ny haran-dranomasina any West Maui. Ao amin'ny Kā'anapali, manokana ny vonomoka mena Acanthophora spicifera dia nanjary lasa be lavitra kokoa, izay nodinihan'ny fikarohana UH ho vokatry ny fiterahana avo lenta avy amin'ny rano fisotro madio sy ny fanafody. Na dia teo aza ny loharanom-pandrefesan'ny tany, dia nitombo ny fitomboan'ny algôma noho ny fisian'ny fihenan'ny haran-dranomasina, izay fikarohana momba ny trondro tany amin'ny toerana iray ihany.
Firafitry ny KHFMA miaraka amin'ny
Kua'anapali Coast, West Maui. © Hawai'i DLNR
Ny fiaraha-miombon'antoka "Fandinihana ny habetsaky ny habetsahan'ny trondro" nataon'ny DAR sy ny fitantanan-draharaha nasionaly momba ny ranomasina sy ny atmosfera (NOAA) dia nanaporofo mazava ny fifandraisana misy eo amin'ny trondro sy ny alim-bary misy alika; Ny trondro betsaka kokoa dia manjary, ny algoraka amin'ny vatohara.
Noho izany, tamin'ny volana jolay taona 2009, ny State of Hawai'i dia nanendry ny Kahekili Herbivore Fisheries Management Area (KHFMA) mba hifehezana ny fiakaran'ny ahidrano an-dranomasina amin'ny haran-dranomasina ary hamerina ny tontolo iainana tontolo iainana hiverina amin'ny fifandanjana mahasalama. Ny famonoana, fandratra, na fanararaotana ny trondro an-dranomasina sy ny trondro misy zava-maniry sasany, ao anatin'izany ny hazandrano, parrotfish, ary ny confortish dia voarara mba hampitomboana ny habetsahan'ny trondro mahasoa sy ny ranomasina ao amin'io faritra io. Voarara koa ny famahanana ireo trondro ireo mba hampiroborobo ny fiompiana. Ny fari-dranomasina dia mipaka hatrany amin'ny Honokōwai Beach Park (ary amoron-tsiraka hatrany amin'ny 1,292 metatra) atsimo sahabo ho 2 kilaometatra mankany amin'ny Beach Hanaka'o'ō (ary amoron-dranomasina lavitry ny 335 metatra) (Sarivongana nohavaozina Hawai'i, Toko 13-60.7 ).
Na dia nanohitra ny fitsipiky ny mpanjono aza ny mpanarato sy ny mpahay kolontsaina, ny ankamaroan'ny fiarahamonina dia nanohana mafy ny KHFMA. Maro tamin'ireo mpanjono teo an-toerana no nahatakatra ny fepetra mahantra ao amin'ny vatohara, ary nahatsapa ny tombotsoan'ny fitantanana ny jono. Ny fanohanana goavana ho an'ny KHFMA dia nitarika fampianarana bebe kokoa tao amin'ilay faritra ary ny fanarahana ny fitsipika.
Hatramin'ny fametrahana ny KHFMA ao 2009, DAR, miaraka amin'ny UH sy ny NOAA ao amin'ny Lapan'ny Nosy Lapozy fisaka (PIFSC), dia nanohy nanara-maso ny vatohara tao Kahekili. Araka ny tatitry ny PIFSC Interim Monitoring tamin'ny febroary 2013, ny valiny dia manondro izao manaraka izao:
Tendrombohitra miovaova amin'ny biomass parrotfishes, izay avo roa heny amin'ny 2009 sy 2012
Ny fampitomboana ny biomass parrotfish dia tsy nizara mitovy tamin'ny KHFMA, ary, indrindra, dia tsy nisy firy na firy ny fanarenana ny biomass parrotfish tao amin'ny faritra marivo sy havoana akaikin'ny Kahekili Beach Park;
Fifandraisana matanjaka tsara eo amin'ny biomass parrotfish totofana sy ny fonon'ny alika maina (CCA). Ny CCA dia algoma tsara izay manan-danja amin'ny fikarakarana ny haran-dranomasina, ary ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny fitomboan'ny biomass parrotfish dia miteraka ny fiakaran'ny CCA
Tsy misy fironana mazava tsara amin'ny biomass amin'ny fialokalofana
Antony iray mety hitranga amin'ny tsy fahampian'ny fiovan'ny toeram-ponenana biberona dia mety ho mifandray amin'ny fiainany; Afaka miaina hatramin'ny taona 40 + izy ireo, noho izany, miaraka amin'ny data telo taona, tsy mahagaga raha tsy niova ny biomass.
Ny fihenan'ny fitomboan'ny biomassa parrotfishes hatramin'ny fananganana ny FMA dia mety ho fampahalalana manan-danja ho an'ny faharetan'ny vatohara. Ny lehibe kokoa ny trondro, ny halalin'ny fakana am-bava, izay zava-dehibe satria manaisotra alkaola avy amin'ny fonon-drano izany, mampiharihary vatam-paty ary manokatra tranokalam-baovao ho an'ny fisorohana ny haran-dranomasina.
Tazo mahasoa voajanahary izay voaro tanteraka ao anatin'ny KHFMA. © Hawai'i DLNR
Ankoatra ny fitomboan'ny trondro voajanahary amin'ny haran-dranomasina mba hifehezana ny algan'ny invasive, ny fitantanana dia tokony hampidirina koa ny fampihenana ny loharanom-pandrefesana amin'ny tany izay miteraka ny elanelana (nitrogen sy phosphorus) avo lenta hita any amin'ny renirano akaiky, izay mety hitondra fiara algal mirehitra.
Ny kalitaon'ny toeram-ponenana mahantra vokatry ny algé invasion sy ny fanjavonan'ny vatohara dia hanana ambany ihany koa ara-toekarena (ara-barotra sy ara-tsosialy) ary ara-kolontsaina.
Ny fanadihadiana dia nampiseho fa niharatsy ny fikorontanan'ny vatohara tao amin'ny tranokala fanaraha-maso; Noho izany, ny mpitantana loharanon-tsolika dia tsy maintsy manao dingana mba tsy hamerenana indray ny vatohara hiverina amin'ny fahasalamany ara-pahasalamana, fa koa hanakana ireo risika hafa amin'ny alàlan'ny haran-dranon'i Maui.
Ny fahatsiarovan-tenan'ny mponina mikasika ny fahasalaman'ny vatohara ho an'ny haran-dranomasina sy ny fiantraikan'ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny ala voajanahary dia mihamitombo hatramin'ny fanendrena ny KFHMA. Miaraka amin'ny fanohanan'ny vondrom-piarahamonina, ny toeram-ponenana Maui West Maui dia notendrena ho laharam-pahamehana voalohany ao amin'ny Hawai'i Coral Reef Strategy, dia nofinidy ho an'ny tetik'asa fitantanana ny fitantanana ny harena an-dranomamy Ridge avy amin'ny fanjakana sy ny tafika amerikana, dia voatondro ho tranonkala laharam-pahamehana any Pasifika amin'ny alàlan'ny tetikasa US Coral Reef Task Force.
Ny fitrandrahana ny Reef dia mitaky fotoana - na dia telo taona monja amin'ny angona aza dia mampiseho ny fihenan'ny biomassa parrotfishes, ny fahasamihafan'ny korontana dia mila fiarovana maharitra mba ho sitrana tanteraka.
Ny fanaovana ezaka marina mba hanomezana angona sy fifanakalozan-kevitra amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana amin'ny fanombohan'ny drafitra drafitra dia ilaina amin'ny fahombiazan'ilay tetikasa. Ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina dia hahazo fahatokian-tena bebe kokoa, hanolotra fandraisana anjara, ary ho anisan'ny dingana famahana olana.
Ireo daty manokana, fotoana sy zava-misy marina dia tena ilaina amin'ny fananana fiaraha-monina mpanohana sy mahay.
Ny famantarana sy ny fandraisana anjara amin'ireo mpandray anjara manan-danja sy ireo mpanarato avy any amin'ny faritra dia afaka manome fahalalana maro ao an-toerana, ary koa ny fividianana sy ny fanarahan-dia ao aoriana.
Ny dingana fametrahana ny KHFMA dia natokana ho an'ny Tahirimbolam-panjakana momba ny tany sy ny loharanon-karena voajanahary (DLNR) ho an'ny sampana misahana ny asa sy ny andraikitra fototra. Ny ezaka fanaraha-maso dia navoaka voalohany tamin'ny alàlan'ny fanomezan-dàlana fanatanjahantena ho an'ny fanatanjahantena ho an'ny fanatanjahantena natolotry ny US Fish and Wildlife Service. Ny nosy Maui sy O'ahu dia maka $ 300,000 / taona (US) avy amin'ny programa, izay i Maui mandany ny $ 200,000 (US) ho fanaraha-maso ny mpiasa sy ny vola hafa mifandraika amin'izany. Ny mpandray anjara hafa dia:
NOAA Division Coral Reef Ecosystem, Nosy Pasifika
NOAA Fandaharanasam-piarovana ny harena an-dranomasina
Mpianatra nahazo diplaoma nahazo vola
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHawai'i Division of Resources Resources, Department of Land and Natural Resources
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandaharan'asan'ny Fikarohana momba ny harena Coral Hawai'i
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA Pacific Islands Centre Science Centre, Coral Reef Ecosystem Division
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Hawai'i Institute of Biological Marine
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoUniversity of Hawai'i at Manoa, Departemantan'ny Botany
Paikady haran-dranomasina Hawaii, State of Hawaii ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPDF)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoValin'ireo trondro voajanahary sy manokatra fisie PDF Benthos ho an'ny 6 Taona Fiarovana ao amin'ny faritra Faritanin'ny Faritanin'ny Kahekili, Maui ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPDF)
Kahekili Herbivore Fishery Management - Valin'ny fanaraha-maso iraisam-pirenena ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPDF)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKahekili Herbivore Manara-maso ny fitantanana
Sata sy fironana amin'ireo haran-dranomasina ao Maui, fizarazaran'ny harena an-drano ao Hawaii (PDF)
Ny faritra fitantanana ny jono any Kahekili Herbivore, fitantanana Herbivore amin'ny ezaka hanatsarana ny fiaretan'ny haran-dranomasina ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPDF)
Loharano vaovao: Mazava ho azy fa ny haran-dranomasina amin'ny haran-dranomasina